Alzeria: Mbola manantena hatrany miaraka amina voromahilala ambinina eo anilan’izy ireoAlgeria: Still Hoping · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Lova Rakotomalala
Voadika ny 26 Jona 2010 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Español, বাংলা, Français
Taorian'ny fahareseny teo anatrehan'i Slovenia, dia nahazo hery ry zareo Alzeriana ny 18 Jona rehefa nifanandrina tamin'ny ekipa Anglisy izay natoky tena ny handreseny. Raha alaina sary an-tsaina ny fifanandrinan'ny vendrana amin'ny ekipa mahay, dia nanome fanantenana ireo mpankafy an-tapitrisany izay manantena fa hahita ny ekipa Maitso handingana ny fihodinana voalohany:
Mpitoraka blaogy Algeriana iray no nametraka tsikera tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Un nul équitable (adi-sahala mifandanja) [fr]:
Nisaraka tamin'ny ady sahala i Algeria sy Angletera taorian'ny 90 minitra izay nanoloran'ny Maitso lalao mendrika, tsy misy hifandraisany amin'ny lalaony teo aloha.
Avy eo nampiany:
Raha nidika fandaozana ny fiadiana ny amboara eran-tany ny fahareseny, dia nanalava ny fijanonany i Alzeria ary miandrandra ny dingana faharoa hanana ny toerany ara-tantara kanefa azo atao tsara mihitsy, dia tsy maitsy mandresy ny Etazonia amin'ny lalaony fahatelo.
Rachida, Alzeriana mipetraka any Frantsa, maneho ny fiderany ny ekipa Algeriana [fr]:
Mifanandrina mandritra ny 90 minitra amin'ireo mpilalao mahay indrindra eran-tany, raha tsy ny ekipa tsara indrindra, dia fifandonana tena goavana kanefa dia vitan'izy ireo izany. Mipoa-tsatroka ambany ho an'ny ekipa Alzeriana!
Mitsikera ireo vokatry ny lalao, Espérance manoratra amina forum fifampiresahana [fr] :
Nilalao tsara izy ireo nanoloana an'i Slovenia saingy mbola tsara miohatra an'izay ity. Tsy nisy fahadisoana be loatra, soa ihany ary mino aho fa mbola afaka manao tsara lavitra noho izay izy ireo
Fantany fa tsy mahay firy mikasika ny baolina kitra izy, fa manome an'ity toro-hevitra ity ihany i Espérance:
Ilay mpilalao Abdoune dia tsy tokony hisolo an'i Ziani, na dia marary aza izy, amin'ny lalao manaraka.
sary nalaina teo amin'ny fahitalavitra nandritra ny lalao
Ity sarina voromailala mipetraka eo ambonin'ny tsatokazo Alzeriana ity dia nanamarika ny lalao ary foto-dresaka any anaty resaka maro any Algeria. Tsikerain'i Djamel amin'ny fomba maneso ity zava-nitranga ity ao amin'ny Facebook:
Ity voromailala mitondra hafatra milaza ady ho an'i Algeria ity kay fitaka nataon'i Defoe sy Heskey. Izany ny paikadin'i Capello ! Heverin'ireo Anglisy fa voromailala mora fitahina isika. Mbouhli, ny mpiandry tsatokazo, nanidina avo noho ity vorona ity ary toa matanjaka lavitra noho ny tosika [amin'ny alalan'ny fanafody] eny anabakabaka.
Tsy very fanantenana ireo Algeriana ary mino fa haharesy ny ekipa Amerikana ny ekipany. Ny fanontaniana dia hoe, mbola ho eo ihany ve ilay voromailala?